RASOLO Elise Ministra teo aloha dia voarohirohy aminy fandorana dosie tao amin(ny ENMG - Taratra du 16 mars 2019 - Survivre à Madagascar dans le milieu des infrastructures télécom et réseaux CISCO
Accueil BIANCO RASOLO Elise Ministra teo aloha dia voarohirohy aminy fandorana dosie tao amin(ny...
Mitohy ny fidirana an-tsehatry ny eo anivon’ny Bianco sy ny Tendro miady amin’ny kolikoly (Pac). Niaka-tsehatra indray ny “Raharaha fandorana dosie ENMG”, omaly ka nahavoasaringotra minisitra iray teo aloha.
Niakatra tetsy amin’ny fampanoavan’ny Pac 67 ha, omaly ny momba io raharaha io. Anisan’ny voarohirohy mivantana ary tsy tokony ho afa-bela ny minisitry ny Fitsarana tany amin’ny volana marsa 2018. Tafiditra ao anatin’izany koa ny tale jeneralin’ny sekolim-pirenena manofana mpitsara sy mpirakidraharaha (ENMG) miaraka amin’ireo mpirakidraharaha sy ny mpiara-miasa aminy tamin’izany fotoana izany. Vokany, napetraka ho anisan’ireo harahin’ny fitsarana maso ny “surveillant general” eo anivon’ny ENMG, hany nantsoina teny amin’ny Pac fa mbola hampanantsoina ny hafa amin’ny manaraka. Hosahanin’ny Fitsarana avo (HCJ) natao hitsara ireo mpitondra ambony kosa ny momba ilay minisitra tamin’ny fotoan’androny noho izy mpiasam-panjakana ambony eo anivon’ny fitantanan-draharaha. Anisan’ny hiahiahiana azy ireo ny resaka fandorana, tsy mazava ireo antontan-taratasy mirakitra ny fanadinana hidirana ao amin’io sekoly io. Nisy ny fidiran’ny Bianco an-tsehatra tamin’ny fanadihadiana sy ny famotorana ary nametrahana ny ahiahy rehetra amin’ny mety hisian’ny kolikoly avo lenta manodidina izany.
ENMG, “Villa Elisabeth”…
Tsiahivina fa niniana nodorana ny taratasim-panadinana, ny firaketana an-tsoratra, ary ny dosie rehetra mifandraika amin’ny fanadinana natao ny 6 sy 7 febroary 2018. Nofoanana izany noho ny fiahiahiana resaka kolikoly. Nohidiana teo imason’ny vadintany ny trano nisy izany mba hitandroana ny hasin’ny fanadihadiana. Novohaina izany anefa nakana ireo taratasy nodorana. Anisan’ny mety mbola ilaina amin’ny fanadihadiana momba ny fiahiahiana kolikoly tamin’ity fanadinam-panjakana ity ireo dosie ireo nefa may.
Araka izany, andrasana indray koa ny tohin’ity raharaha ity, ankoatra ny “Raharaha Villa Elisabeth”.
Article précédentFahamaizana taratasim-panadinana tao amin’ny ENMG – Ao anatin’ny lisitr’ireo voasaringotra ny ministra taloha RASOLO Elise – Ao Raha du du 16 mars 2019
Article suivantCorruption à l’ENMG, Rasolo Elise en mauvaise posture – Les nouvelles du 16 mars 2019